YomaLan - Page 167 of 196 - News Media
အနှစ် ၂၀ လုပ်အားခနဲ့ တန်ဖိုးညီမျှတဲ့ အကြံပေး စကား ၃ ခွန်း လက်ထပ်တာ ၁ နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဆင်းရဲလွန်းလို့ …
လင် အလုပ်သွားချိန် ဇနီးက တခြားလူနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတုန်း ၉ နှစ်အရွယ်သားလေး ဗီရိုထဲဝင်ပုန်းနေ
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အလုပ်သွားနေတုန်း ဇနီးသည်က တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန်လေသည်။ ဇနီးဖြစ်သူမှာ ၉ နှစ်အရွယ်သူ့သားလေး အိပ်ခန်း ဗီရိုထဲဝင်ပုန်းနေတာကို သတိမထားမိခဲ့ပေ။ ထိုအချိန်တွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူက မမျှော်လင့်ဘဲ …
မလေးရှားနိုင်ငံရောက်မြန်မာများ သတိထားသွားလာကြဖို့ ကြောငြာချက်ထုတ်ပြန်
အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲများကို အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပနေတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ သတိထားနေထိုင်ကြဖို့ မြန်မာသံရုံးက သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ သတိပေးချက် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် …
YBS ခရီးသည်တင် ယာဉ်ပေါ်သို့တက်ရောက်ပြီးယာဉ်မောင်းအားဝါးတုတ်ဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ကာ ငွေတောင်းယူသွားသူအမျိုးသား ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၂၃ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီအချိန်ခန့်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ညောင်တုန်းလမ်း၊ မီးခွက်ဈေးမှတ်တိုင်၌ YBS 20 …
မော်ဒယ်လ်သင်တန်းဘစ်ကားစီးပြီးတက်ခဲ့ရသလို အဘိုးကအင်္ဂလိပ်လူမျိူးပါဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်အဝင်း တိုင်ရွန်
မော်ဒယ်လ်သင်တန်း Bus ကားစီးပြီး တက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြတဲ့ တိုင်ရွှန်။ အဘိုးက အင်္ဂလိပ်လူမျိူးပါတဲ့။ မြန်မာပြည်အဝင်း တိုင်ရွှန် လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာပြည်အဝင်းဆိုပြီးတော့ ပရိသတ်အားပေးမူရရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်တိုင်ရွှန်ရဲ့ နာမည်အရင်းက …
သထုံ သြဂုတ်​ ၂၃ ယ​နေ့ နနံက်​ ၁၁ နာရီ​ခွဲ အချိန်​ခန့်​က သထုံမြို့ နယ်​ ရှမ်းစု ​ကျောင်းလမ်း​နေ မစိုးစိုးမာ ၏အိမ်​ထဲသို့ …
ဘစ်ကားပေါ်မှ အုပ်စုလိုက် ၀ိုင်းမုဒိန်းကျင့်ခဲ့သည့်ရုပ်သံ ဆိုရှယ်မီဒီယာများကဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် တရားခံ(၆)ဦးအား ဖမ်းဆီး
မော်ရိုကို (23-8-2017) မော်ရိုကိုနိုင်ငံက မြို့ တွင်းပြေးဆွဲနေတဲ့ ဘစ်ကား တစီး ပေါ်မှာ အမျိုးသမီးငယ်တဦးကို ကားသွားနေစဉ် အုပ်စုလိုက်ဝိုင်း မုဒိန်းကျင့်နေကြတာကို ကားပေါ်မှာ ပါလာသူတွေက …
အဖြစ်က ဒီလိုဗျ ကျနော် မလေးရှားကို လေယာဉ်နဲ့သွားတုန်းက အိမ်သာတက်ချင်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ယောကျာ်းလေးအိမ်သာက လူပြည့်နေတာဗျ ကျနော် မျက်နှာပျက်နေတာကို လေယာဉ်မယ်လေးကတွေ့တော့ သနားပြီး အမျိုးသမီးအိမ်သာကို အသုံးပြုခွင့် …
လေးစားအပ်ပါသောဆင်ဆာအဖွဲ့ဝင်လူကြီးမင်းများခင်ဗျား… လူကြီးမင်းတို့ဖတ်ရှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်၊ မနက်ဖြန်ဆင်ဆာအစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရမည့်ကိစ္စများဖြစ်ပါသော်လည်း ခရီးသွားရန်စီစဉ်ပြီးဖြစ်ပါ၍ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် တင်ပြပြောဆိုလိုသည်များကို အများပြည်သူပါသိရှိနိုင်စေရန် ဒီနေရာမှတင်ပြလိုက်ရပါသည်၊ ( အထက်ပါစာပိုဒ်တွင် ” ဆွေးနွေးသည် ” …
ကမ္ဘာမြေဆွဲအား ကို ဆန့်ကျင် ထွန်းပနေတဲ့ ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုး
ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရား ကျိုက်ထီးရို ရင်ပြင်တော်ကနေပြီး အနောက်ဘက်သို့ မျှော်ကြည့်ရင် စစ်တောင်းမြစ်ကို ကျော်လွန်ပြီး ပဲခူးရွှေမော်ဓော စေတီတော်ကို ဖူးမြင်နိုင်ပါတယ်။ – ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်သို့ တက်ရန် …
ညစ်ညမ်းပုံတွေပျံ့နှံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သရုပ်ဆောင် မြတ်ကေသီအောင်၏ ခင်ပွန်းဟောင်း ရှင်းပြီ
ကျွန်တော်နာမည် အောင်ဇော်လတ်ပါ ကျွန်တော်ယခု အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မှာနေပါသည် ကျွန်တော်ယခဒီpostကို မတင်ချင်ခဲ့ပါဘူး ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အခု ကျွန်တော်အသိုင်းအဝိုင်း ဆွေးမျိုးအပေါင်းသင်းကြားမှာ အရှက်တကွဲ စိတ်မကောင်းချင်းများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရသောကြောင့် …
အမျိုးသမီးငယ်ကို ဘာကြောင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့တာလဲဆိုတာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူထွက်ဆို
ယခင်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ပြဿနာကြောင့် ငါးကင်လာပို့တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူထွက်ဆို ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေ ထပ်မံသိရှိရပါတယ်။ …
အောင်လအန်ဆန် ဘာကြောင့် အနိုင်ရခဲ့တာလဲ
မြန်မာ့စပါးအုံးမြွေ (Burmese Python) လို့ တင်စားကြတဲ့ အောင်လအန်ဆန် (Aung La N Sang) ဟာ အလိန်းဂါလာနီ (Alain Ngalani) …
မိန်းကလေးများ သတိထားကြပါ။ ဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့ များ ဒီလောက်ထိ ရက်စက်နိုင်ကြတာလဲ..ရှင်..။
ဒီဇင်ဘာ(၂၂)ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့ လွိုင်မွေဖက်သွားသည့်လမ်းဘေးတစ်နေရာ နမ့်လပ်ရေအားလျှပ်စစ်အကျော်နားတွင် အမည်မသိ အမျိုးသမီးအလောင်း(မီးရှို့)ခံထားရသည့် အနေအထားမြင်ကွင်း ပါ။ အဘယ်ကြောင့် ဘာအတွက်ကြောင့် (မီးရှို့)သတ်ဖြတ်သွားသည်ကို ယခုချိန်ထိ မသိရသေးပါ။ ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲပါ။ ယနေ့(၂၅)ရက်နေ့တွင် …
ချစ်သူတွေ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ V DAY မှာ ရင့်နင့်ဖွယ် ရာ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ၁၈ နှစ်အရွယ် မိန်းခလေး 😭
သက်ငယ်မုဒိန်းမှု ကျူးလွန်သူ နှစ်ဦးအားအမိန့်ချလိုက်ပြီ
သက်ငယ်မုဒိန်းမှု ကျူးလွန်သူ နှစ်ဦးအား ထောင်ဒဏ်နှစ် (၃၀) ချ ======================================= ကန့်ဘလူခရိုင်တရားရုံးမှ ဖေဖော်ဝါရီလ၁၅ရက်နေ့က သက်ငယ် မုဒိန်းမှု ကျူးလွန်သူ ၂ဦးအား အလုပ်ကြမ်းနှင့် …
မင်္ဂလာဆောင်မယ့်နေ့ အသုဘနေ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သတိုးသားလောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ရင့်နင့်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်
မင်္ဂလာဆောင်မဲ့နေ့မှာဘဲ သတိုးသားလောင်းအသုဘနေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ရတဲ့ ရင့်နှင့်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာဖြစ်ပါတယ်။ ရင်နင့်ဖွယ်အသုဘနေ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ Photo Credit to Original Uploader
ဆရာမလေးတွေကို ဘယ်သူတွေ စာနာပေးနိုင်မလဲ . . .
ယောင်္ကျားရင့်မာကြီးတွေပုံတင်ပြီး မျက်ရည်ချုတတ်တဲ့ကောင်တွေ ထမိန်ဝတ်တွေ ချေးကျွေးရမယ်။ နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုတာ ကျရာတာဝန် ထမ်းရတာပဲလေ ၊ မင်းတို့လိုသာ ပေးဆပ်ရလို့ အခွင့်အရေး ပိုယူမယ်ဆို သူနာပြု သမ္မတတွေ …
ပြည်သူတွေသံသယဖြစ်နေတဲ့ မုဒိမ်းကျင့်သူက ၃ ယောက်လား ၆ယောက်လား
FDA ဝန်​ထမ်း မ​ရွှေရည်​ဝင်း​သေဆုံးမှုနှင့်​ပတ်​သတ်​ပြီးသတင်းသမားများ..ပြည်​သူများ၏ထင်​မြင်​ယူဆချက်​များ သက်​ဆိုင်​ရာ ရဲဌာမှမှုခင်းဖြစ်​စဉ်​ကိုတရားဝင်​သတင်းထုတ်​ပြန်​ခဲ့​ပေမဲ့…​မေးခွန်းများစွာ​မေးရန်​ရှိ​နေဆဲ ဖြစ်​ပါတယ်​…. ပြစ်​မှုကျူးလွန်​သူတိုင်းကိုတရားဥပ​ဒေအရ ထိ​ရောက်​စွာအ​ရေးယူအပြစ်​​ပေး​စေချင်​ပါတယ်​….
ပြိုင်ပွဲ မတိုင်မီရက်များတွင် ထိတ်လန့်ဖွယ် အဖြစ်များနှင့် ကြုံတွေ့ ရသဖြင့် အောင်လအန်ဆန်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည်ဟု ဂါလာနီ ဆို
ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏ အားကစားကွင်းတွင် နိုဝင်ဘာလ ( ၃) ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော ONE Championship ပြိုင်ပွဲ ၏ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွင် လက်ရှိ …